Semalt विशेषज्ञ: भूत रेफरर स्पाम कसरी लड्न?
रेफरर स्पाम स्प्यामको तुलनात्मक रूपमा नयाँ र कष्टकर रूप हो। अर्थहीन सन्दर्भकर्ताहरूले तपाईंको वेबसाइटहरू कल गर्दछ र गुगल एनालाइटिक्स डाटा स्प्याम गर्दछ। तपाईं आफ्नो वेबसाईटलाई रेफर स्प्यामको लागि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले आफ्नो ट्राफिकमा अचानक र असामान्य वृद्धि अनुभव गर्नुभयो। तपाईंले गुगल एनालिटिक्स रिपोर्ट नियमित आधारमा जाँच गर्नुपर्नेछ कि तपाईंको वेबसाइटले वास्तविक आगन्तुकहरू वा नक्कली अवलोकनहरू प्राप्त गरिरहेको छ भनेर हेर्नका लागि। त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका सन्दर्भकर्ता स्प्यामहरू छन्: पहिलोमा क्रॉलरहरूको बारेमा हो जसले तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्छन् र अनावश्यक हिटहरू र प्रभावहरू निम्त्याउँछन्, र दोस्रो प्रकार एनालिटिक्स आईडीहरूको अनियमित बस्टि। हो। तपाईंको गुगल एनालिटिक्स आईडी अनियमित रूपमा चयन गरिएको छ, र तपाईंले ट्राफिक प्राप्त गर्न शुरू गर्नुभयो जुन तपाईंको वेबसाइटमा कुनै मतलब छैन।
Artem Abgarian, वरिष्ठ ग्राहक को सफलता प्रबन्धक Semalt , यहाँ सान्दर्भिक स्पामको कसरी केही व्यावहारिक सुझावहरू प्रदान गर्दछ।
क्रोलर रेफरल स्प्याम स्प्यामको सब भन्दा साधारण र परम्परागत प्रकारहरूमध्ये एक हो। यो माकुरो र बट्सको बारेमा हो जुन अनियमित रूपमा तपाइँको वेबसाइटलाई सूचिकृत गर्दछ र यसलाई नक्कली ट्राफिक पठाउँदछ। क्रोलर स्पाम मेटा नियमहरू रeरोबोट्स.टी.टी. नियम को उपेक्षा गर्दछ, र भूत स्प्याम मात्र तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाता भित्र फिल्टरहरू रोक्न सकिन्छ। हामी तपाईंलाई .htaccess फाईलको साथ क्रलर स्प्याम रोक्न सिफारिस गर्दछौं।
.Htaccess मा दुर्भावनापूर्ण क्रॉलरहरू रोक्नुहोस्:
.Htaccess फाईलमा मालिसियस क्रोलरहरू रोक्न सम्भव छ। तपाईंले तपाईंको .htaccess फाईलमा एक विशिष्ट कोड थप्नु पर्छ, र स्प्याम क्रोलरहरू कुनै समय बिना नै रोकिनेछ। तपाईंले सम्झनु पर्दछ कि यस प्रविधिले भूत रेफरर स्पामसँग काम गर्दैन। भूत स्प्याम रेफरर स्पामको परिष्कृत प्रकार हो र यसले रेफरर सर्भरहरूलाई तपाइँको वेबसाइट भ्रमण नगर्न निम्त्याउँछ। स्प्यामबोट्सले तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खाताको साथ ट्रिक गर्न प्रयास गर्दछ वा तपाईंको एनालिटिक्स आईडी चोरी गर्दछ तपाईंलाई दुर्भावनापूर्ण ट्राफिक पठाउनका लागि।
तपाईले आफ्नो वेबसाइट खोज ईन्जिन परिणामहरूमा शीर्ष फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तर यो लामो समयसम्म रहनेछैन। ह्याकरहरू र स्प्यामरहरू प्राय: गुगल मापन प्रोटोकल प्रयोग गर्दछ, जसले तिनीहरूलाई डाटा Google एनालिटिक्स सर्भरमा सिधा पठाउन अनुमति दिन्छ। यो तपाईको गुगल एनालिटिक्समा प्राथमिक त्रुटि हो र यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु पर्छ। तपाईले समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ होस्टनामहरूबाट मात्र डाटालाई अनुमति दिएर जहाँ एनालिटिक्स आईडी प्रयोग गरिएको छ। निश्चित गर्नुहोस् कि सेटिंग्स पूर्वनिर्धारित गर्न समायोजित छैन; यस समाधानको साथ एकमात्र समस्या यो हो कि तपाइँ आफैले फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ, र यो जो कोहीका लागि महत्वपूर्ण बोझ हुन सक्छ। तपाईंले गुगल विश्लेषक डेटा र तपाईंको फिल्टरहरू स्प्यामिंगबाट रेफरकर्ता होस्टनामहरू रोक्नु पर्छ। यसका लागि तपाईले आफ्नो Google एनालिटिक्स खातामा प्राथमिक एन्टी-स्प्याम उपायहरू सक्षम गर्नुपर्नेछ र स्प्याम बोटहरू र माकुरोलाई तपाइँको तथ्या from्कबाट हटाउनुहुन्छ:
१. तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खातामा जानुहोस् र सेटिंग्स पृष्ठमा जानुहोस्।
२. विकल्पहरू जाँच गर्नुहोस् जुन "ज्ञात स्प्यामबटहरू रोक्नुहोस्" भन्छ।
यदि तपाइँ भूत रेफरल स्प्याम हटाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईले सबै मान्य होस्टनामहरूको सूची बनाउनुपर्नेछ र तिनीहरूलाई REGEX ढाँचामा राख्नु पर्दछ। तपाईं आफ्नो गुगल एनालिटिक्समा केहि फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई ब्लक गर्नको लागि सबै वेबसाइटहरू जस्तै semalt.com र darodar.com थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यो बिर्सनु हुँदैन कि यो ट्रिकले मात्र काम गर्दछ जब तपाईंको ऐतिहासिक डाटा सफा हुन्छ।